साप्ताहिक राशिफल बि.स. २०७६ जेठ २६ देखि ३२ गते सम्म ( सन २०१९ जुन ९ देखि १५ तारिक सम्म) – Complete Nepali News Portal
साप्ताहिक राशिफल बि.स. २०७६ जेठ २६ देखि ३२ गते सम्म ( सन २०१९ जुन ९ देखि १५ तारिक सम्म)
ScotNepal June 7, 2019
ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) +९७७– ९८४२२१९७३५
बि.स. २०७६ जेठ २६ देखि ३२ गते सम्म ( सन २०१९ जुन ९ देखि १५ तारिक सम्म)
आज सर्व प्रथम यो साता भरि पर्ने महत्वपुर्ण पर्व तथा दिनहरु बारे जानकारी लिऔं ।
सर्वप्रथम यो साता भित्र पर्ने मुख्य पर्व तथा दिनहरु
जेठ २६ गते – रविसप्तमी व्रत, कुमार यात्रा, शुभ विवाह मुहूर्त र रुद्रिपुजा – शिववास) जुरेको दिन छ ।
जेठ २७ गते – अष्टमी व्रत, गोरखकाली पुजा, शुभ विवाह मुहूर्त र अग्निवास ( होमादी कार्य ) जुरेको दिन छ ।
जेठ २८ गते – हृषिकेश उत्सव, शुभ विवाह मुहूर्त र रुद्रिपुजा – शिववास) जुरेको दिन छ ।
ंजेठ २९ गते – हत्यामोचन तिर्थस्नान, रुरुरिडीक्षेत्रमा मेला, बच्चाको अन्न प्राशन – पास्नी) का लागि मुहूर्त, नयाँ व्यापार व्यावसायको शुरुवात – दोकान खोल्न) का लागि मुहूर्त, व्रतबन्ध मुहूर्त, शुभ विवाह मुहूर्त र अग्निवास ( होमादी कार्य ) जुरेको दिन छ ।
जेठ ३० गते – निर्जला एकादशी व्रत, तुलसीको दल राख्ने दिन, शुभ विवाह मुहूर्त, रुद्रिपुजा – शिववास) र अग्नीवास ( होमादी कार्य) जुरेको दिन छ ।
जेठ ३१ गते – बाजुरा बेहडाबाबामा जलार्पण र शुभ विवाहका लागि मुहूर्त जुरेको दिन छ ।
जेठ ३२ गते – मष्टो पूर्णीमा, ज्यापुन्ही, कवीर जयन्ती र रुद्रिपुजा – शिववास) जुरेको दिन छ ।
यो साता ग्रह गोचरको अवस्था
यो साता चन्द्रमा ले मुख्य गरि जेठ २६ र २७ गते सिंह राशि, २८ गते र २९ गते कन्या राशि, ३० र ३१ गते तुला राशि र ३२ गते बृश्चिक राशिमा गोचर गर्नेछन । अन्य ग्रहहरु शुक्र र सुर्य वृष राशिमा। बुध, राहु र मंगल मिथुन राशिमा, बृहस्पती वृश्चिक राशिमा र शनी र केतु धनु राशिमा हुनेछन । ग्रहहरुको यो अवस्थाले प्रत्येक राशिमा के असर पर्छ भनेर विष्लेषण गरि यो साप्ताहिक राशिफल तयार गरिएको छ ।
मेष राशि – मेष राशिका लागि यो साता चन्द्रमा को गोचर पञ्चम, षष्टम, सप्तम र अष्टम भाव मा हुनेछ । समग्रमा मेष राशिका लागि यो साता शुभ रहेको छ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक क्षमता बढ्नेछ । सिर्जनात्मक एवं कलात्मक कार्य बाट नाम र दाम दुबै आर्जन हुने योग छ । व्यापार व्यावसाय सकारात्मक रहनेछ । धन आर्जन हुनेछ । साझेदारीमा कुनै नयाँ कार्य को शुरुवात हुन सक्नेछ । शत्रु पराजित हुनेछन भने स्वास्थ्य अवस्था पनि यो साता सबल रहनेछ। बिहिबार र शुक्रबार तपाईका लागि विशेष दिन रहेका छन। यि दिनहरुमा प्रेम तथा रतिराग मा समय बित्न सक्नेछ । जिवन साथी सँगको घनिष्ठता थप मजबुत हुने देखिन्छ । यो साता प्रेम तथा पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ । विद्यार्थीको पढाईमा एकाग्रता को अभाव हुन सक्नेछ । यो साता तुलनात्मक रुपमा शनिबार कमजोर दिन रहेको छ । यो दिन अनावश्यक विवाद बाट बच्नु उत्तम हुनेछ । साताका यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ गङ गणपतय नम मन्त्र ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
वृष राशि –वृष राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर चतुर्थ, पञ्चम, षष्टम र सप्तम भावमा हुनेछ । यो साता घरपरिवार मा महत्वपूर्ण जमघट हुनेछ। घरमा मांगलकि कार्य हरुको आयोजना हुन सक्नेछ । परिवारमा खुशीयाली छाउनेछ । यो साता आम्दानी बढ्नेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित लाभ हुनेछ । साझेदारी का कार्य बाट समेत लाभ हुनेछ । नोकरी गर्नेहरु लागि कार्य स्थलमा सहयोगी वातावरण हुनेछ । मनमा जाँगर र उत्साह भरपुर हुनाले कार्यक्षमता बढ्नेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि यो साता सुमधुर रहनेछ । तपाईको अपेक्षा अनुसार प्रेमी बाट साथ र सहयोग हुनेछ । भौतिक सुख सुविधामा बढोत्तरी हुनेछ । विद्यार्थीका लागि हेर्दा मन अस्थिर रहनाले पढाई विग्रन सक्नेछ । पढाईमा सफलता प्राप्त गर्न तपाई थप जिम्मेवार बन्नु आवश्यक देखिन्छ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी देवीको आराधना गर्नू शुभ हुनेछ ।
मिथुन – यो साता चन्द्रमा तपाईको तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम र पष्टम भावमा गोचर गर्नेछन । तपाईको भाई बहिनी प्रति मनमा स्नेह र प्रेम पढ्नेछ । भाईबहिनी बाट पनि तपाई लाई कार्य सफल बनाउन सहयोग हुनेछ । तर मंगलबार र बुधबार भने आफ्ना आफन्त बाट धोका हुने एवं स्वास्थ्य कमजोर हुन सक्नेछ । माता पिताको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्नेछ । अन्य दिनहरु भने सकारात्मक रहेका छन । साझेदारीका कार्यबाट समेत उचित मुनाफा आर्जन हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सरिक भइनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य सफल रहनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि कार्य स्थलमा सहयोगी बातावरण प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहनेछ । विद्यार्थीका लागि अनुकुल रहेको छ। तपाईको मेहेनत र परिश्रमको पुरा मुल्य प्राप्त हुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ विष्णवे नम मन्त्र ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
कर्कट राशि – तपाईका लागि चन्द्रमाको गोचर द्धितीय, तृतीय, चतुर्थ र पञ्चम भावमा रहनेछ । कर्कट राशिका लागि यो साता मिश्रित रहेको छ । व्यापार व्यावसाय सकारात्मक रहनेछ । नयाँ क्षेत्रका व्यावसायी हरु सँग चिनजान हुने र कारोबारको क्षेत्र बढ्ने योग छ । तपाईको सञ्चार सीप थप मजबुत हुने देखिन्छ । तपाईको बोलीका कारण महत्वपुर्ण व्यक्तिहरु प्रभावित हुनेछन । पारिवारिक सम्बन्ध मिश्रित रहनेछ । आफ्ना दाजुभाई सँग कतिपय विषयमा विवाद पर्न सक्नेछ । सचेत रहनुहोला । बिहिबार र शुक्रबार आर्थीक अवस्था कमजोर रहने देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्र बाट समेत चुनौतीहरु देखिन सक्नेछन। प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सामान्य रहनेछ । विद्यार्थीको पढाईमा समेत विभिन्न कारण बस वाधा आउन सक्नेछ । तर साताको अन्तिम दिन शनिबार भने सबल रहनेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ भने बौद्धिक एवं सिर्जनात्मक क्षमता सबल रहनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ बृम बृहस्पतय नम मन्त्र ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
सिंह राशि – सिंह राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर प्रथम, द्धितीय, तृतीय र चतुर्थ भावमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा सिंह राशिका लागि यो साता सबल रहनेछ । शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मजबुत हुनेछ । कुनैपनि काम पुरा आत्मविश्वास का साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ । अप्ठ्यारो अवस्थामा भाईबहिनी बाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । धन स्थानमा चन्द्रमाको गोचर व्यापार व्यावसायमा सफलता मिल्नेछ । तर खर्चको मात्रा बढ्नाले बचत का लागि संघर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन मिश्रित रहनेछ । आफु भन्दा ठुला व्यक्तिसँग विवाद पर्न सक्नेछ । आफ्नो बोली र व्यावहारमा संयमता अपनाउनु होला । बिद्यार्थीको पढाईमा सकारात्मक समय रहनेछ । आफ्नो पढाई बाट सन्तुष्ट हुने अवस्था आउनेछ । तपाईका लागि शनिबार भने कमजोर दिन रहेको छ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी भगवान सुर्यको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ।
कन्या राशि – कन्या राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर द्धादश, प्रथम, द्धितीय र तृतीय स्थानमा हुनेछ । आईतबार र सोमबार अचानक खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ । बढि दौडधुप गर्दा पनि काम बन्न नसक्दा चिन्ता बढ्न सक्नेछ । तर मंगलबार देखि भने अवस्थामा सुधार हुनेछ । शिर मा चन्द्रमाको प्रभाव रहने हुनाले आत्मबिश्वास एवं आत्मसम्मान उच्च रहनेछ । सामाजिक कार्यबाट ईज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । आर्थीक अवस्था सबल रहनेछ । व्यापार व्यवासाय बाट उचित मुनाफा आर्जन हुनेछ । आफ्ना दाजुभाईको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । छोटा एवं रमाईला यात्राहरु ले गर्दा मन प्रफुल्ल रहनेछ । यो साता घर जग्गा सम्बन्धि कारोबार बाट बढि लाभ हुने देखिन्छ । परिवारमा मेलमिलाप र एकता कायम हुनेछ । आफ्नो जिवन साथि बाट उचित साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढाई कमजोर हुनाले विद्यार्थी ले पढाईमा बढि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ कुल देवताय नम ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
तुला राशि – तुला राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गाचर एकादश, द्धादश, प्रथम र द्धितीय भावमा हुनेछ । अधुरा रहेका कार्यहरु पुरा हुनेछन । तपाईले लामो समय देखि प्रयास गर्नु भएको काम यो साता बन्न सक्नेछ । मंगलबार र बुधबार भने चन्द्रमाको व्यय स्थानमा गोचर का कारण स्वास्थ्य मा गडबढी हुन सक्नेछ । उपलब्धि बिहिन यात्राहरु हुन सक्नेछन । मन अस्थिर एवं उदास रहन सक्नेछ । बिहीबार देखि अवस्थामा महत्वपुर्ण सुधार हुनेछ । साथीभाईको साथ र सहयोग ले आत्मविश्वास बढ्नेछ । यो साता व्यापार व्यावसाय मा पनि मिश्रित अवस्था रहनेछ । तर साताको अन्त्य तिर आम्दानी बढ्नेछ । परिवारमा मेलमिलाप कायम हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ । आफ्नो प्रेमी सँग देखिने मनमुटावहरु छिटै समाधान हुनेछन । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ वासुदेवाय नम ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
बृश्चिक राशि – बृश्चिक राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर दशम, एकादश, द्धादश र प्रथम भावमा हुनेछ। समग्रमा बृश्चिक राशिका लागि यो साता शुभ रहेको छ । नोकरी मा तपाईको अवस्था सबल रहनेछ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरु तपाईको जिम्मेवारी प्रती खुशी रहनेछन । कार्य स्थलमा तपाईको कार्यको प्रशंसा हुनेछ । सन्तान बाट सुख हुनेछ । पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । माता पिताको मार्गदर्शन तपाईका लागि अमुल्य हुनेछ । मनमा भएका पिर चिन्ता दुर हुनेछन । चन्द्रमा को गोचर लाभ स्थानमा हुनाले आर्थीक अवस्था सकारात्मक रहनेछ । त्यसैगरि व्यापार व्यापसाय बाट पनि उचित लाभ मिल्नेछ । विशेष गरि कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यापार व्यावसायबाट सोचे अनुरुप नै लाभ मिल्नेछ । धन बचत हुनेछ । बिहिबार र शुक्रबार भने खर्च बढ्ने दिनहरु देखिन्छन । कुनै मालसामान हराउन सक्नेछ सचेत रहनुहोला । शनिबार भने सकारात्मक दिन रहनेछ । बिद्यार्थीको पढाईका लागि उत्तम साता रहेको छ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन पनि सुखद रहनेछ । आफ्ना मान्छे सँग कुनै नयाँ ठाउँमा गई रमाईला पलहरु बिताउन सक्नुहुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी श्री गणेशाय नम मन्त्र ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
धनु राशि – तपाईका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर नवम, दशम, एकादश र द्धादश भावमा हुनेछ । धनु राशिका लागि यो साता शुभ रहने देखिन्छ । यात्राको योग छ । यात्रा बाट महत्वपुर्ण उपलब्धि समेत हात लाग्नेछ । सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा तपाईको मन जानेछ । ईज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । साथीभाई सँग रमाईला पल हरु व्यतित हुनेछन । नोकरीमा सफलता मिल्नेछ । सहकर्मी साथी बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । ब्यापार व्यावसाय बाट उचित लाभ मिल्नेछ । बिशेष गरि पुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री सम्बन्धि कारोबार बाट उचित लाभ मिल्नेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा परिवारका सदस्य बिच विवाद पर्न सक्नेछ । साताको अन्त्य तिरका दिनहरु मा प्रेमी सँग वादविवाद पर्नाले मन खिन्न हुन सक्नेछ । आपसी समझदारी कायम गर्न इमान्दार प्रयास आवश्यक छ । अध्ययन कार्यमा मन जानेछ । प्रतिस्पर्धिलाई चुनौती दिन सक्नुहुनेछ । विदेश यात्राको योग छ । तुलानात्मक रुपमा ग्रहको । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ सोम सोमाय नम मन्त्र ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
मकर राशि – मकर राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर अष्टम, नवम, दशम र एकादश भावमा हुनेछ । तपाईका लागि साताको शुरु का दिनहरु आईतबार र सोमबार निर्णया क्षमता कमजोर हुने देखिन्छ । आफुले सोचे जस्तो नहुँदा चिन्ता बढ्न सक्नेछ। तर मंगलबार देखि भने दिन हरु शुभ रहनेछन । आफ्ना साथिभाई बाट महत्वपुर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसाय मा विस्तार हुनेछ । आम्दानीका क्षेत्रहरु बढ्दै जानेछन । नोकरी गर्ने हरुका लागि पनि सकारात्मक रहनेछ । नयाँ कुरा सिक्न पाईने हुनाले आफ्नो अनुभव एवं क्षमता बढ्नेछ । । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सुखद रहनेछ । जिवन साथी सँग कतिपय विषयमा विवाद पर्न सक्नेछ । तर भावनात्मक सम्बन्ध भने प्रगाढ रहनेछ । आफ्नो प्रेमीको हरेक सुख दुखमा साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीृको पढाइमा प्रगती हुनेछ । पढाईमा साथी एवं गुरुवर्ग बाट सहयोग हुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी भगवान शिवको पुजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ ।
कुम्भ राशि – यो साता तपाईका लागि चन्द्रमाको गोचर सप्तम, अष्टम, नवम र दशम भावमा हुनेछ । कुम्भ राशिका लागि साताको शुरुका दिन शुभ देखिएका छन । मन प्रफुल्ल हुनेछ । तपाईको अरु प्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक रहनेछ । अरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा तपाई जागरुक भएर सहयोग गर्न अगाडी सर्नु हुनेछ । मंगलबार र बुधबार अष्टम भावमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले मनमा चिन्ता एवं डर बढ्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन सक्नेछ । कार्यस्थलमा सहकर्मी साथी बाट झुटो आरोप लाग्न सक्नेछ । सचेत रहनु आवश्यक छ । आर्थीक अवस्था मा उतार चढाव हुने देखिन्छ । विहिबार देखि दिनहरु सकारात्मक हुनेछन । व्यापार व्यावसायमा सफलता मिल्नेछ । विद्यार्थीको पढाईमा मन जानेछ । पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन कार्यमा निस्कनु अघि वा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात गर्नू अगाडी ॐ गं गणपतय नम ३ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ ।
मिन राशि – तपाईका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर षष्टम, सप्तम, अष्टम र नवम भावमा हुनेछ । मिन राशिका लागि आईतबार र सोमबार कमजोर दिनहरु रहेका छन । आफ्ना आफन्त सँग विवाद पर्न सक्नेछ । शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था समेत विग्रने देखिन्छ । तपाईको उपलब्धि देखेर रिस गर्नेको संख्या बढ्न सक्नेछ । आफ्नो जिवनसाथी सँग प्रेमिल समय वित्ने देखिन्छ । जिवन साथीको प्रेम र समर्पण भावले तपाई नतमस्तक रहनुहुनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या देखिन सक्नेछ । आफ्नो आहारबिहार मा विशेष ध्यान दिनुहोला । आर्थीक अवस्था सबल रहनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित मुनामा आर्जन हुनेछ । विशेष गरि आयात निर्यात सँग सम्बन्धित कारोबार बाट बढि बढि सफलता मिल्ने देखिन्छ । नोकरिमा तपाईको कार्यको उचित कदर हुनेछ । आफ्ना दाजुभाई तथा परिवारका अन्य सदस्य सँग सल्लाह लिएर कार्य गर्नु उत्तम हुनेछ । यसले आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य सफल रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटावहरु देखिए पनि ठुलो समस्या हुने छैन । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन भगवान सुर्य लाई जल चढाउनु शुभ हुनेछ ।
पाथिभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरुन ! हेर्नुहोस् तपाई को...
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन, हेर्नुहोस् साउन ११ गते सोमबारको...
पाथिभारा माताले कल्याण गरुन ! आजको राशिफल बि.सं. २०७८ साल...
१० गते आइतबार आजको राशिफल पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुन...
पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुन ! आजको राशिफल बि.सं. २०७८...
पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुन ! हेर्नुहोस आजको राशिफल बि.सं....